Wasiirka Diinta ee XF Somaliya oo xaqiijiyay in aysan barri CIID aheyn | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiirka Diinta ee XF Somaliya oo xaqiijiyay in aysan barri CIID aheyn
Wasiirka Diinta ee XF Somaliya oo xaqiijiyay in aysan barri CIID aheyn
Muqdisho (Halqaran.com) – Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri ay noqon doonto maalinta ugu dambeysay ee bisha Soonqaad, maadaama caawa bishii la waayey, sidaasi darteed Axadda ayaa la ciidi doonaa.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa sidoo kale soo tebisay in bishii Soonfur aan laga arkin dalkaasi, isla markaana maalinta berri la dhameystiri doono bisha Soonqaad.
Sidoo kale, dalalka Indonesia, Malaysia, Philippines iyo Singapore ayaa ku dhawaaqay in la dhammeystiri doono berri Soon.
Wasiirka Diinta ee Xukuumadda Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa dhankiisa sheegay in maalinta berri aysan aheyn Ciid.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa xaqiijin qotodheer ka dib in berri oo Sabti ah aanay ahayn Ciid; sidaas darteed waxaa la dhammaystiraynaa Bisha Ramadaan” ayuu yiri Wasiir Sheekh Nuur.